कति लाग्छ नयाँ नोट छाप्‍न खर्च ? – ramechhapkhabar.com
कति लाग्छ नयाँ नोट छाप्‍न खर्च ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बर्सेनि नयाँ नोट छाप्‍न करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ खर्चने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नयाँ नोट छाप्‍ने गरेको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन् । नोट छपाइको लागत नोटअनुसार फरक हुने उनले बताए ।
१० रुपैयाँ नोट छाप्‍न सबैभन्दा कम र ५०० दरका नोट सबैभन्दा छाप्‍न बढी लागत लाग्‍ने उनको भनाइ छ । रुपैयाँ हेरेर एउटा नोट छाप्‍न १ रुपैयाँ ४० पैसा देखि ४ रुपैयाँ ६८ पैसासम्म लागत लाग्‍ने उनको भनाइ छ । सबैभन्दा कम लागत १० रुपैयाँको नोट छाप्‍न प्रतिवटा १ रुपैयाँ ४० पैसा र सबैभन्दा धेरै लागत ५०० दरका नोट छाप्‍न प्रतिवटा ४ रुपैयाँ ६८ पैसा लाग्छ ।
त्यस्तै ५ रुपैयाँ दरका नोट छाप्‍न प्रतिवटा १ रुपैयाँ ५८ पैसा, २० रुपैयाँ दरको नोट छाप्‍न १ रुपैयाँ ७५ पैसा, ५० रुपैयाँ दरको नोट छाप्‍न २ रुपैयाँ ६७ पैसा १०० रुपैयाँ दरको नोट छाप्‍न २ रुपैयाँ ९९ पैसा र सबैभन्दा धेरै १००० दरका नोट छाप्‍न प्रतिवटा ३ रुपैयाँ ३७ पैसा लाग्छ । बजारमा ६ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँबराबरको पैसा रहेको पनि उनले बताए ।